chii chinonzi Compiz Fusion | Linux Vakapindwa muropa
Kwechinguva, ini ndine pfungwa yekunyora zvishoma nezve ichi chishamiso icho chiri CompizFusion.
Ndakafunga: Ini ndinofanira kutanga ndapa tsananguro nezve chii chinonzi Compiz Fusion, uye tobva tazvitsaurira pachedu kuisa nekugadzirisa iyo. Asi ngatitangei nenheyo.
Kuti ndiedze kujekesa iyo pfungwa kwandiri uye ndione kuwanda kwatinoziva zvakajairika pamusoro penyaya iyi, ndakaita ongororo diki uye iyi ndiyo mhedzisiro yandakawana pandakabvunza mubvunzo uri nyore: Iwe unofunga chii chinonzi Compiz Fusion?
* a ... uh ... sarlangen
* kumwe kugadzirwa
* zvinonzwika kujairika asi handizive kuti chii
* kusanganiswa kwetango uye techno, chimwe chinhu senge Gotan Project
* iri kuUbuntu izvo Aero kuWindows
* ndizvo zvinoita Ubuntu windows kubatidza moto
Kuonekwa uye kufunga izvo kana tikati Ubuntu isu tese tinoziva zvakawanda kana zvishoma izvo zvatiri kutaura nezvazvo, zvaishamisa uye zvakandishamisa kwandiri kuti iyo pfungwa ye Compiz haina kunge yakapararira kazhinji pakati pevashandisi vanoshandisa Windows uye izvo, mumaonero angu, ndizvo zvakanaka zvandakaona mairi Linux, uye chikonzero chinonakidza chekuyedza.
Ngatidzokerei kumusoro wenyaya: uye chii icho zvino?
CompizFusion iri, sekureva kunoita zita rayo, kubatana pakati pezvirongwa zviviri zve software: Compiz y Beryl.
Compiz iyo mupepeti wehwindo. Zviri nyore kwazvo. Iyo inotipa isu mukana wekunatsiridza desktop desktop uye akasiyana windows ayo atinoshandisa nguva dzese mukuda kwedu (gadzirisa typography, iwo mavara, shandisa madingindira ezvidhori uye kunyangwe emawindows, nezvimwewo). Uyezve, zvinotipa mukana wekushandisa mhedzisiro kuzviitiko zvakasiyana zvakajairwa, sekuti, semuenzaniso, kushandisa iyo Alt + tebhu ipfupi, kurerutsa kana kuwedzera windows, nezvimwe. Izvi zvinoitwa nekushandisa echinyakare plugins ayo, pamusoro pekushandira sehwaro (uye musimboti) kune mamwe mashandiro, inopa mhedzisiro. Nekudaro, chirongwa chakafanana chinomuka chakadaidzwa CompizExtras iine akawanda matsva mapulagini ane anowedzera kusimba mhedzisiro uye yakakwenenzverwa kwazvo interface kubata.
Kune rimwe divi ndiko chirongwa Beryl, iri 'yakakosha' forogo yeiyo yekutanga Compiz chirongwa. Saka shanduko zhinji dzainge dzaitwa kune musimboti wezvaive Compiz, iyo vhezheni yakadaidzwa quinnstorm yakanyanya kutarisana nekushongedzwa kwehwindo uye kuiswa kwemapulagi ayo akawedzera kugadzirisa zvinoonekwa zveiyo interface, iyo 'chihwitsi chemaziso'. Kubva ipapo iyo yekushongedza hwindo inozvarwa Emerald, yakakurudzirwa kwazvo, iyo inotibvumidza yakakwira kwazvo nhanho yemunhu (kugona kusevha zvisikwa zvedu -misoro yekuishandisa pane dzimwe nguva).
Chekupedzisira, mapurojekiti ese ari maviri anosangana kusvika kune yanhasi Compiz Fusion, inovavarira kuvandudza mashandiro uye mashandiro eCompiz nemamwe maturusi akawanda, plugins nemaraibhurari. Uye kutsigirwa kwenharaunda mbiri dzakabatanidzwa, hongu.
Ini ndinofungidzira wafungidzira, Compiz Fusion chirongwa chakavhurika-sosi, saka chiri mukusimudzira kwese nekuvandudza. Vazhinji vanogadzira vanotora chikamu zuva nezuva kuti vazvigadzirise, gadzirisa mabugs uye nekupa rutsigiro rwevashandisi. Izvo zvinotipa mukana wekuva neCompiz yekutamba yakanyanya, yakareba kwazvo nguva;).
Nei ndiri kukuudza izvi zvinoita kunge zvinofinha? Nekuti mune nyaya dzekugadzirisa ndipo panotungamira Linux kana ichienzaniswa neWindows mumaonero angu. Kutanga kubva padanho rekuti PC yangu ndeyangu, uye ndinofanira kunge ndine maturusi ekuigadzirisa, kuivandudza, kuiparadza kana kuita nharaunda yangu ive yakanaka kana yakaipa sezvandinoda, pasina matambudziko akakura. Uye kuita zvese izvo, Compiz Fusion ndiyo yakanaka sarudzo: D
Haudi here kuzviisa izvozvi?
Compiz Fusion paWikipedia
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Uye chii chinonzi Compiz Fusion?
Madhirezi !! Muchina wangu hapana chekunyora kumba nezve kana, uye ini handina kumbove nematambudziko !!
Pandakaedza Beryl (makore mashoma apfuura), yakamhanya pasi pePIII 800 Mhz, Nvidia 4400 64 MB uye 256 RAM. Mhedziso panguva iyoyo: NDAKAMIRA !!!
Iye zvino ndinomhanya Compiz-Fusion pane iyo Core 2 Duo, Nvidia 8600 GT 512 MB uye 2 GB RAM. Chinokosha ndechekuti: Bhururuka TOO !!!
Zvakajairika kuti maficha anofanirwa kudya se "nguruve dzine nzara" zviwanikwa zvePC edu (pakutanga kuaona vanoita sekudaro), muLinux zvinoshamisa kuti iwo akareruka, asinganetseke nezvekubvisa masevhisi pakutanga kana kubvisa zvirongwa zviri kumhanya kana iwe vhura yedu Distribution.
Eric Aguilar akadaro
Ichokwadi pasina mamwe compiz fusion plugins haigone kurarama (uye handizive kuti ndakazviita sei kusvika zvino)
Kupfuura chero chinhu mukushanda, uchikanganwa nezve cube uye iyo inodonha (sezvo iri yakachena chirauro) xD
Pindura kuna Erick Aguilar
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Compiz Fusion yakaunza zvakawanda kuLinux. Kwete chete iyo inowedzera akawanda mashandiro, kunyangwe hazvo ese asiri iwo anobatsira, asi zvakare yakave inonyanya kukwezva kune vashandisi veWindows kuyedza Linux.
Parizvino ndiri kupa hurukuro muzvikoro zvesekondari, kuitira kuti ndizivise nezvemahara software neLinux, uye kushamisika kwevana pavanoona Compiz kufamba kuri kukosha.
Uye kufunga kuti vamwe vanotenda kuti iyo Mac OSX interface ndiyo yakanakisa.
Ini ndinofunga zvakanyanya yaive fungidziro yemhedzisiro yecompiz iyo yaive yekuti vazhinji vakasiya guin-dos ndokutamira kuLinux uye ini ndaive mumwe weavo hehehehe
@ bachi.tux: Iwe unotaura kuti waedza pamachina ane makadhi evhidhiyo, ini ndaedza pamachina asina kana kadhi revhidhiyo kunze kweiyo yakabatanidzwa iyo isu tese tinoziva kuti ine miganho yakawanda, uye kwete mhedzisiro yese iri kushanda zvakanaka, asi vanoita.Zvinonyanya kubatsira, izvi zvinoratidza kugona, kunyangwe muCD Live modhi, sezvo Sabayon inodhonza chaizvo nemhedzisiro, uye kuti zvese zvinoremerwa mu RAM. Compiz haibvunze chero chinhu kubva kune chero OS ine Nice mhedzisiro kunyangwe vakati ivo mazhinji acho akateedzerwa, haana machisa !!!
Ini ndinofunga kuti iwe ikozvino utaure mune zvakatumirwa nezve iyo Live CD uye kuti inobatsira sei vashandisi vazhinji kuti vaswedere padhuze neGNU / Linux vasina kubata bata pane yavo HDD.
Ini ndakachinjira kuUbuntu kweCompiz Fusion xD
Nehurombo, mune yekupedzisira Ubuntu gadziriso, zvese zvakange zvakuvadzwa uye zvaive zvisisiri kuziva vhidhiyo kadhi rangu
Mwanakomana weopium akadaro
Icho ndechekuti yekupedzisira vhezheni yeUbuntu yanga iri fiasco, chokwadi, kutaura chokwadi ndatenda kwazviri ndafunga kuita shanduko kunaDebian, kuti mushure mekuyedza zvishoma, ini handisati ndanzwisisa kuti sei vanhu vachizvipa mhosva se zvakaoma, zvimwe kunze kweiyo iri kundirumawo iPC-BSD
Pindura Mwanakomana weOpium
Ndiri kufa kushandisa compiz fusion, asi kadhi rangu remifananidzo haripindirane, vakandipa zano rekuti nditenge nvidia, iyo yakachipa zvikuru yaizondishandira zvakanaka.
Ndinovimba ndinogona kunakidzwa neakanakisa mhedzisiro, nenzira, nderupi rwiyo ruri rwuri muvhidhiyo?
Stephen Arriola akadaro
zvakanaka, asi compiz-fusion yakanaka nekuti kana ichishanda BRAND vhidhiyo kadhi (NVIDIA neATI)
hama yangu yake yemakore matanhatu komputa
1.2ghz, 384 ram memory uye Nvidia 4400 64mb Vhidhiyo Kadhi
kana ichishandira munhu wese
uye yangu packard bhero notibhuku
1.5ghz, 1.1gb gondohwe uye ATI 256 mb vhidhiyo kadhi
kana ichishanda: P
Pindura Esteban Arriola
Mhoroi, mumwe munhu angandiudza maitiro ekugadzirisa compiz fusion mu ubuntu 8.04 Ini ndanga ndatsvaga yakawanda mu san google pandakangowana uye ndakakwanisa kumisikidza asi ipapo yangu compiz fusion yakaenda kune iyo bitch nekuti haina kutakura grub uye yakaita kwete kutanga windows kana Ubuntu, asi sezvo ini ndiri mutsva kwazvo, ndaifanira kutanga mawindows angu kuti ndikwanise kuGoogle nekuwana ruzivo nezve kukanganisa 15, 17 ne21 kwandakawana asi ikozvino handichakwanise kuwana iro peji uye Ini handikwanise kumisikidza iyo compiz uye vese avo vanoti muGoogle maitiro ekuisa compiz ... pinda iyo peji ndokuendesa iwe kumurume uyo anokuratidza vhidhiyo ye3d desktop yake uye haakuudze kuti shit yekumisikidza iyo ndiyo chinhu chakaipa vazhinji vavo vanotenda nekuti vane ruzivo rwakawanda uye havadi kuita zvidzidzo zviri nyore senge iyo ini yandakawana kukwanisa kuisa iyo ubuntu asi hei rimwe zuva ndichawana zvakare yakafanana kana imwe tuto iyo inondiudza maitiro shandisa compiz fusion
Mhoroi, ini ndiri kuona kuti iwe unoziva zvakawanda nezve linux, zvakanaka handitaure kuti windows chinhu chakashata asi linux iri nani !!! wobva warodha pasi wubi (kuisa linux kubva kumawindo) uye panguva yekuitangazve kuti umise, zvinofamba zvakanaka asi ... ndakatanga sekunge ndaishandisa cd inorarama asi chinhu chimwe chete chinoitika kwandiri, chete midziyo yedesktop asi ini ndinobata chimwe chinhu kana kuchisiya ndisina kumbofamba kwechinguva uye chobva chabondera, vangandimise zvakanaka kana vakandibatsira !!! ...
Ini handichina 3d mhedzisiro
uye kugadzirisa macompiz mapakeji
Uye iripi C: / disk?